192.168.8.1 - Setha kabusha i-Router yakho kuzilungiselelo ezizenzakalelayo
Setha kabusha i-Router yakho kuzilungiselelo ezizenzakalelayo
Ungase ufise uku Setha kabusha i-Router yakho kuzilungiselelo ezizenzakalelayo uma ungakwazi ukukhumbula iphasiwedi yomlawuli, ngeke ukwazi ukukhumbula inkinobho yokuphepha yenethiwekhi engenantambo, noma uxazulula izinkinga zokuxhuma.
Indlela engezansi ayifani nokuqalisa kabusha imodemu noma i-router.
Izindlela ezihlukile zokusetha kabusha i-Router - Ukuboniswa okuqinile, okulula, kwamandla okuhamba ngebhayisikili
Izindlela ezihamba phambili zokusetha kabusha ama-Routers
Izindlela eziningi zokusetha kabusha i-router zingasetshenziswa zincike esimweni. Okunconywa ngokujwayelekile ukusethwa kabusha okunzima, ukusetha kabusha okuthambile namandla okuhamba ngebhayisikili.
Ungayisetha kanjani kabusha i-Router yakho ukuze Izilungiselelo ezizenzakalelayo
Ukusetha kabusha okunzima
Ukusetha kabusha kanzima uhlobo olubi kakhulu lokusetha kabusha i-router futhi kuvame ukusetshenziswa ngenkathi umlawuli ehlulekile ukukhumbula okhiye noma iphasiwedi futhi ufisa ukuqala kabusha ngezilungiselelo ezintsha.
Ukusetha kabusha kanzima akubuyisi noma kususe inguqulo ye-router firmware efakwe manje. Ukuvimbela izinkinga zokuxhuma kwe-inthanethi, khipha imodemu ye-broadband ne-router ngaphambi kokwenza kabusha kanzima.
Ukwenza ukusetha kabusha kanzima:
Shintsha i-router, uyijike ohlangothini olunokhiye we-Setha kabusha. Ukhiye wokusetha kabusha ungaphansi noma emuva.
Ngomzuzu othile futhi ubukhali, njenge-toothpick, ubambe ukhiye wokusetha kabusha imizuzwana engamashumi amathathu.
Khulula ukhiye wokusetha kabusha bese ulinda imizuzwana engamashumi amathathu ukuze i-router isethe kabusha ngokuphelele iphinde ivule amandla.
Indlela engena esikhundleni wukusetha kabusha kanzima 30-30-30 okubandakanya ukucindezela ukhiye we-Setha kabusha amasekhondi angamashumi ayisishiyagalolunye kunamashumi amathathu futhi kungazanywa uma ama-main-secondstypedoes engasebenzi.
Abadali abaningi be-router bangaba nendlela ekahle yokusetha kabusha i-router, futhi amanye amasu wokusetha kabusha i-router kungenzeka ahluke phakathi kwamamodeli.
Ukuhamba ngebhayisikili kwamandla
Cisha futhi uvule amandla we-router waziwa njengamandla okuhamba ngebhayisikili. Isetshenziselwa ukubuyela ezinkingeni ezibangela ukuthi i-router ilahle ukuxhumeka ngokwesibonelo ukulimala kwimemori yangaphakathi yeyunithi noma ukushisa. Imijikelezo yamandla ayisusi amaphasiwedi agciniwe, ezinye izilungiselelo ezilondoloziwe noma okhiye bezokuphepha, ngedeshibhodi yomzila.
Ukwenza umjikelezo wamandla umzila:
Cisha amandla erutha. Futhi cisha inkinobho yamandla noma ususe ipulagi yamandla.
Susa ibhethri kuma-routers anikwe amandla ibhethri.
Abantu abaningi balinde imizuzwana engamashumi amathathu ngaphandle kokusebenza; namanje akudingeki ukuthi ulinde ngaphezu kwemizuzwana ethile phakathi kokunqamula nokufaka kabusha ipulagi yamandla erutha. Kepha ngokusetha kabusha okunzima, ukuqala kabusha ukusebenza komzila kuthatha isikhathi uma amandla ebuyisiwe.
Ukusetha kabusha okuthambile
Ngenkathi uxazulula inkinga ngokuxhuma kwe-inthanethi, kungasiza ukusetha kabusha isixhumanisi phakathi kwemodemu nomzila. Lokhu kungafaka kuphela ukuvimba ukuxhumana ngokomzimba phakathi kwalokhu okubili, hhayi ukulawula isoftware noma ukumisa amandla.
Uma kuqhathaniswa nezinhlobo eziningi zokusetha kabusha, ukusetha kabusha okuthambile kusebenza ngokushesha ngokushesha njengoba bengadingi ukuthi i-router iqale kabusha.
Ukuze wenze ukusetha kabusha okuthambile, nqamula ikhebula elixhumanisa i-router nemodemu, bese uphinde uhlangane ngemuva kwesikhathi esithile. Ambalwa ama-routers angaba nendlela engajwayelekile yokwenza ukusetha kabusha okuthambile:
Cinga ukhiye onqamula / Xhuma kudeshibhodi. Lokhu kusetha kabusha isixhumanisi phakathi komhlinzeki wesevisi nemodemu.
Izigaba How To Imeyili kwemikhumbi
Ungayithola Kanjani i-IP router?